Xirfadaha Gawaarida: Bareega, Kileeshka, Santuukha Geerka, Isteerinka iyo Tuulka Baabuurta | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Xirsi Faarax — April 19, 2020
Maqaalkan waxxaa uga hadli doonaa: Bareega, Kileeshka, Santuukha Geerka, Isteerinka iyo Tuulka Baabuurta. Haddii aadan horey u arkin ama aadan u akhrisanin cashiradii ka horeeyay kuwaan waxaad booqan kartaa halkaan oo fadlan riix halkaan: https://afrikaan.so/archives/author/maxamed2020
Bareeegu waa hab istaajiya ama joojiya gaariga. Gaari walba inta lugo uu leeyahay ayaa bareegiiisuna yahay, oo lug walba bareeg iyada qabta ama joojiya ayey leedahay. Sidoo kale bareegu waa meesha soosaarta awooda lagu yaraynayo ama lagu ilaalinayo socodka baabuurka (waxa uu soosaaaraa awooda lagu dhimayo ama lagu joojinayo socodka baabuurka waxa uuna kuxiran yahay dhamaan taayirada oo dhan).
Qasabado ama tuubooyin
7. Sheentaraalo (boostiinooyin:- faroodooyinka lugaha iyo qam ama qab:- cadadka bareega iyo boston)
Saliid bareegu waxa ay kujirtaa boskis bareega, waxaana qaada qasabadaha bareega. Qasabaduhu waxay siimayaan shaataraalo. Saliidu marka ay soogaalayso shantaraalka waxaa sida hal qasabad waxaana kabaxa labo qasabadood, waxayna kala aadan Qamta –ama- boostajiinada Qamta. Marka ay saliidu soogasho waxaa dhaqaaaq samaynaya bostomka Qamta wuxuuna cadaadinayaa cadadka bareega. Qamaha qaar waxay leeyihiin afar Bostom qaarna waxa ay leeyihiin hal Bostom.
Boostajiinada marka ay saliidu soogasho waxaa dhaqaaq sameeya kitka wuxuuna cadaadiyaa kaawayska, hadii ay siidayso ama daadiso saliida lugka mid ah lugaha ama ay dhamaato saliidu waxa wareeg ah kuuma qabanayo ama sifiican uma qabanayso ama uma istaajinayso. Lugkasta waxa ay leedahay niibal laga eersaaro.
Kileeshku waa hab xiriiriyo matooorka iyo kaanbiyaha, marna kala jaro si uu matooku ugudbiyo awooda socodka. Waxaana la isticmaalaa marka geerka gaariga labadalayo.
Marka kileesha laqabto waxaa istaagaya iskusocodkii ka imaanayey matoorka ee taayirada baabuurka aadayey.
Saxanfarasyoon ama saxan kileesh waxa uu kuxiran yahay wanaanada (waxay kuxirantahay kariinka), saxanka waxaa haya bilatoon. Isbiindada waxaa wareejiya kariinka waxayna leedahay afar xarig balaag oo kalo ah 1,2,3 iyo 4 waxayna u kala xiran yhn 1,3,4,2.
Qaybaha uu kakooban yahay kileeshku:
Kileeshku waxa uu ka koban yahay; Badeel, Qasabado, Faxmad, Waran, Isliif kileesh, Bilatoon, Bokis kileesh, Kit kileesh, Saxan kileesh, Waran, Saliid iyo Farsheele.
Geerbokiska (santuukha geerka):
Santuukha geerka waxaa lagu magacaabaa gudbiyaha awooda matoorka, waana halka ugu muhiimsan ee gudbinta awooda matoorku ay kadhacdo sidoo kale waxa uu leeyahay waxqabad awood xukun. Santuukha geerku waxa uu uqaybsamaa labo nooc oo kala ah Santuukh Geer aan laxukumin iyo Santuukh Geer laxukumo.
Santuukha geerka ee la xukumo marka la geer badalayo waxaa la qabtaa kileesha si loo kala jaro xariirka kadhaxeeya Matoorka iyo Santuukha geerka (Kaambiyaha).
Santuukh Geerka aan la xukumin waxa uu si iskiis ah ugudbiyahaa ama ubadalaa xawaaraha gaariga. Sidoo kale waxa uu leeyahay kooxo geerar ah oo iskuxiran looguna yeero Meere geer, kaas oo ka kooban Geer Dhexe, Geer Wareegsan iyo sadex geer oo gudaha ah, kuna wareega inta udhaxaysa geerka dhexe iyo geerka wareegsan.
Meere Geerku waxa uuleeyahay labo awadood dhaliye oo udhaxeeya Geerka dhex iyo Geerka wareegsan iyo hal awood soosaare oo kuxiran Meere Geer Qaadaha.
Socodka Geerka wareegsan waa mid joogto ah oo aan istaagayn wuxuuna wareejiyaa labada awood dhaliye kadib geerka dhexe bay wareejinayaan si uu uwareejiyo Meere Geer Qaadaha kaaso oo asna sii wareejinaya Geerka awooda soosaara. Marka lasiyaadiyo socodka Geerka wareegsan waxaa siyaadaya xawaraha ay soconayaa labada awood dhaliye kadibna waxaa badanaya awoodii ama xawaarihii lasoosaarayey.
Waxa ay kukala duwan yihin labada Santuukh Geer (kaambiye):
Saantuukha geerka ee la maamulo waxa uu leeyahay kileesh laakiin santuukha geerka ee aan la maamulin malahan kileesh. Santuukh geerka ee aan lamaamulin malahan geer badal, taas oo keenaysa awood gudbintiisu in ay kugudubto si iskeed ah oo aan lamaamulayn, halka santuukha geerka ee lamaamulo uu leeyahay geer badal taasoo laga xukumo socodka gaariga.
Labada Santuukh waxa ay qabtaan isku shaqo oo ah in ay gudbiyaan socodka uu Matoorku dhaliyey mana ahan kuwo gabi ahaantoodaba kala wudan laakiin qaabka uu ushaqeeyo Santuukha Geerka ee aan lamaamulin ayaa ah qaab cajiib ah.
Isteerinku waxa uu leeexiyaa lugaha hore ee baaburka asaga oo darawalka u ogolaanaya hadba halka uu rabo. Isteerinku waxa uu ka kooban yahay, Giraan, Sabarad, Xariiriye guud, Khasaanad, iyo Gacmo.
5. Tuulka gaariga:
Tuulku waa agabka lagu furfuro laguna xirxiro baabuurta. Waxa uuna kakooban yahay agab aad ufaro badan, laakiin waxa aan kasooqaadanaynaa inta ugu muhiimsan agabkaas. Tuulka baabuurtu waxa uu uqayb samaa labo qaybood oo kala Tuulka Dabka iyo Tuulka Makaanikada.
Tuulka ama agabka furfurida iyo xirxirida baabuurta waxaa ka mid ah: Baanado, Giriigyo, Biinsooyin iyo Dismisyo.
Tags: Isteerinka iyo Tuulka BaabuurtaKileeshkaSantuukha GeerkaXirfadaha Gawaarida: Bareega
Next post Taariikh Nololleedka RW Hore ee Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde)
Previous post Xidigtii Instagram oo uu Xabsi Korona Ku Dhex-haleelay